Murder in the Alps 2.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.2 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း Murder in the Alps
Murder in the Alps ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါအဲလ်ပ်တောင်တန်းများတွင်လူသတ်မှုအဘယ်သူမျှမကအခြားတူသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်း features တွေနဲ့အပြည့်အဝအပြန်အလှန်မှုခင်းဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။ , 1930 မှနောက်ကျောခရီးသွားအများအပြားနက်နဲသောအရာဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အချိန်တို့၏စစ်မှန်လေထုခံစားရသည်။
အဆိုပါဇာတ်လမ်းအဲလ်ပ်တောင်တန်းများတွင်အလှဆုံးနေရာများတွင်တဝေးတွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်ဟိုတယ်အတွက်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အမှုအရာလျင်မြန်စွာအဆိုးဆုံးတွေအတွက်အလှည့်ယူပါ။ အဆိုပါဧည့်သည်များထဲကတစ်ခုပျောက်ဆုံးသွားသည့်အခါအဆိုပါပုံပြင်စတင်နှင့်အခြားထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပေါ်ရန်စတင်ရှေ့မှာရှည်လျားမဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုတယ်တွင် holidaying သူအန်နာ Myers, ဇူးရစ်နေတဲ့သတင်းစာဆရာ, နက်နဲသောအရာကိုဖြေရှင်းဖို့သူ့ကိုယ်သူပေါ်မှာကြာပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုတစ်ရက်နှင့်အတူကြံစည်မှု thickens နှင့်အန်နာဆယ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဇာတ်ကောင်တဦးလူသတ်သမားဖြစ်နိုင်သည့်ဆုံးဖြတ်ရပေမည်။
ဂိမ်းတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ, သင်အဲလ်ပ်တောင်တန်း၏ airy အလှတရားကနေသွေးအပြည့်ဖြည်မြေအောက်ခန်း၏နက်နဲသောပင်လယ်မှများစွာသောထူးခြားသောနေရာများသို့သွားရောက်ပါလိမ့်မယ်။ စွဲငြိဖွယ်ရာဂိမ်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ storyline ခံစားရသည်။ စိတ်ထူးခြားဆန်းကြယ်ပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်တစ်ခုချင်းစီကိုအဆုံးနှင့်အတူတိုင်းဇာတ်ကောင်အပြန်အလှန်, သူတို့တလိမ်လူသတ်သမားဖြစ်သည့်တွေ့ရှ။ လူသတ်သမားသင်နှင့်အခြားသူလူတိုင်းရရှိသွားတဲ့ရှေ့တော်၌ကိုယ်အမှုဖြေရှင်းကြမည်နည်း သငျသညျအပေါငျးတို့သသဲလွန်စထွက်တွက်ဆဖို့လုံလောက်တဲ့အမြန်-witted ဖြစ်ပါသလား သင်အဲလ်ပ်တောင်တန်းခုနှစ်တွင်လူသတ်မှုမှအဖြေကိုရှာတွေ့နိုင်သလော အဲဒီမှာအထဲကရှာတွေ့မှတစ်ဦးတည်းသာလမ်းဖွင့်, ဒါကြောင့်ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တူသောအတွေ့အကြုံကစောင့်ကြိုဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့မှန်ဘီလူးနှင့်သင့်စုံထောက်ဦးထုပ်ရ!
ဂိမ်း features တွေ:
* immersive storyline - 1930 ၏စစ်မှန်လေထုတွေ့ကြုံခံစား!
အပြန်အလှန်ဂိမ်း၏ * နာရီ, ဟိုတယ်နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်၏တစ်ဦးချင်းစီသည်အခန်းကိုလေ့လာစူးစမ်း!
* စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်မှောင်မိုက်လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အတူဇာတ်ကောင်နှင့်အတူဖြည့်ပြီးပြီ! ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အတူအပြန်အလှန်နှင့်လူသတ်သမားဖြစ်သည့်တဦးတည်းထွက်ရှာ!
အံ့သြဖွယ် Animation နဲ့ကိုပြင်းစွာမှုတ်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူ * အသေးစိတ်ဂရပ်ဖစ်!
* Built-in မဟာဗျူဟာလမ်းညွှန်ဂိမ်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းနှင့်အတူသင်ကူညီ!
* တစ်ခုချင်းစီမြင်ကွင်းတစ်ခုရှားပါးစုဆောင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်, ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းမှာကြည့်ဖို့မကြောက်ပါနဲ့!
* ထူးခြားသောအောင်မြင်မှုအများကြီး, အခြို့ရရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အချို့အကြီးအကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်!
* Amazing Mini-ဂိမ်းများ, ဝှက်ထားသောအရာဝတ္ထုမြင်ကွင်းများနှင့်ပိုပြီး! ဒီဂိမ်းကသင့်ခြေချောင်းပေါ်တွင်သင်စောင့်ရှောက်မည်!
အသစ်သောနောက်ဆုံးသတင်းများ, ပြိုင်ပွဲနှင့်ပိုပြီးများအတွက် Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ https://www.facebook.com/crimeinthealps
Murder in the Alps အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Murder in the Alps အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Murder in the Alps အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Murder in the Alps အား အခ်က္ျပပါ
appsandgames2019 စတိုး 718 248.34k
Murder in the Alps ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Murder in the Alps အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.nordcurrent.com/general-terms
Murder in the Alps APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ